Nhoroondo - Goridhe Laser
Isu tiri vanobatana nevatengi vedu kubva kutanga kutaurirana kune mushure mekutengesa-service. Semubatsiri wehunyanzvi, tinokurukura izvo zvinodiwa nevatengi vedu uye nekugadzira mhinduro dzinowedzera kushanda uye kuwedzera-kukosha. Pamwe pese - ISO 9001 yakagadziriswa maitiro keteni - tinopa inoratidzika kwazvo laser mhinduro package.
2018 Tinogara tiri munzira.
2017 MES yakangwara yekusangana manejimendi system yakabudirira yakagadziridzwa, uye yakanyatsoshandiswa mumafekitori.
2016 Goldenlaser smart pono neakazvimiririra maviri-musoro system yakatangwa, yakabudirira yaiswa mune indasitiri yematehwe neshangu.
2014 Goridhe Laser Yekutengesa uye Yekufambisa Center muUSA neVietnam yakasimbiswa zviri pamutemo.
2013 Dhijitari Technology Center yakavambwa.
2012 Fly yekutarisa kamera inozivikanwa laser yekucheka system yakagadzirirwa dhayi-sublimation yemitambo indasitiri yakatanga kubudiswa.
2011 Muna Chivabvu 2011, GOLDEN LASER yakanyoreswa zviri pamutemo paMusangano weKukwira Enterprise weShenzhen Stock Exchange (stock code: 300220)
2010 Yakapindira mune yesimbi yekumaka uye yekucheka munda, VTOP - Fiber laser rubatsiro mubatanidzwa yakavambwa.
2009 CO2 RF simbi lasers yakagadziridzwa neGOLDEN LASER yakavhurwa.
Otomatiki Galvo laser yekuveza system ye roll zvinhu yakatangwa.
GOLDEN LASER yekutanga 3.2 metres yakakura CO2 laser yekucheka muchina yakaunzwa. Iko kugona kwemaitiro eGOLDEN LASER yehukuru hukuru furati CO2 laser yekucheka Machine inozivikanwa kwazvo muindasitiri.
2008 Inopindira muindasitiri yemachira indasitiri. Iyo yekutanga nguva yekutora chikamu mufauro dhizaini yekuratidzira yakagamuchirwa zvakanaka.
2007 Yenyika yekutanga laser bhiriji yakaburitswa, ichiwana musanganiswa wakakwana wekuputira kwemakomputa uye laser kucheka.
Iyo Super yakakura fomati 3D ine simba inosimudzira laser engraving muchina yakatangwa.
2006 Mushure memakore matatu ekutsvaga nekuvandudza, yakamisikidzwa sisitimu yakashambadzirwa, inoona laser muchina uchidzora kuburikidza ne USB dhata yekufambisa, internet kuwana data kuendesa, uye yakawanda-muchina kushamwaridzana inowanikwa.
2005 Iyo yakakura-fomati laser yekucheka michina ine conveyor tafura yakaiswa mukugadzirwa, izvo zvinoreva mukana weemagetsi kugadzirwa kwe laser cutter.
2003 GALVO laser yakateedzera kugadzirwa mutsara wakagadzikwa; GOLDEN laser magetsi magetsi aburitswa.
2002 Chekutanga Chinese Garment laser yekucheka muchina yakatangwa, yakanaka musika feedbacks kumba uye kunze kwenyika.